ကြိုးဝိုင်းထဲမှာမြင်တွေ့ရတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလူနှစ်ယောက်။ – SoShwe
So Shwe February 15, 2022	Sport Leaveacomment
မိန္းမယူလုိက္ၿပီျဖစ္တ့ဲ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ယူႏိုက္တက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ႀကီး Maguire
ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလူသားတစ်ဦးဟုဆိုနိုင်သည့် Hafthor Bjornsson သည် ကမ္ဘာ့စံချိန်အဖြစ် (၅၀၁) ကီလိုဂရမ်ကို အကောင်းဆုံး “မ” ပြခဲ့ပြီးနောက် အဓိကပြိုင်ဘက် Eddie Hall ကို ကြိုးဝိုင်းအတွင်း၌ အလဲထိုးသွားရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (၅၀၁) ကီလိုဂရမ်ကို “မ” ပြခဲ့ခြင်းသည် Hafthor Bjornsson အတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ရုံတင်မကဘဲ Eddie Hall ရဲ့ စံချိန်ကိုလည်း ချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
🚨TWO HOURS LEFT!🚨 . If you guys wantachance to win one of two 25kg autographed plates from the 501kg pull, head to hafthorbjornsson.com to purchasearaffle ticket! All proceeds will be sent to the charities of the winners choice (at our discretion) minus the cost of shipping! Winners will be picked tomorrow! 🙌🏼
A post shared by Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) on May 14, 2020 at 10:54am PDT
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခု၌ ယခုကဲ့သို့ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် Eddie Hall ရဲ့စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်နိုင်သည်က ပိုမိုအရေးကြီးသလား သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်စံချိန်သစ်တစ်ခု တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းက ပိုမိုအရေးကြီးသလားဆိုသည့်မေးခွန်းအပေါ် Hafthor Bjornsson က “ကျိန်းသေပေါက် ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်မိသားစုအတွက်ပါ။ ဒါက နံပါတ် (၁) ပါပဲ။ Eddie Hall နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်က သိပ်ပြီးမသန်မာဘူး၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း မကြံ့ခိုင်ဘူးလို့လူတွေကပြောနေကြပါတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော့်အတွက် တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။”
“ကျွန်တော်ဒါတွေကို မှားယွင်းကြောင်းသက်သေပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြီး အခုလည်းသက်သေပြခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အများစုက ကျွန်တော့်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါ။” ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Eddie Hall နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမည့်ပွဲနဲ့ပတ်သက်၍လည်း Hafthor Bjornsson က “ကျွန်တော် အခုလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆင်းပြီး အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူ့ကိုသေချာပေါက်အလဲထိုးနိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။” ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Good luck to @thorbjornsson for his 501kg deadlift today, hope he smashes it and look forward to him attempting it atacompetition too when all this is over 💪 #BackUpYourBull Big Love Team Beast
A post shared by Eddie hall – The Beast (@eddiehallwsm) on May 2, 2020 at 1:56am PDT
Long journey ahead. I’ve been training boxing now for aboutaweek. I need to improve my gamealot and I’m looking forward to putting in the work! This is my 6th session with @skuliarmannsson 🙌🏼 when I started this journey 10 days ago, I weighed 206kg now I’m down to 196kg. I will drop much more weight in the coming weeks and months as I work on my endurance and technique.
A post shared by Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) on May 12, 2020 at 7:38am PDT
Hafthor Bjornsson နဲ့ Eddie Hall တို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ပွဲကို မတ်လ (၂၂) ရက် နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးထိုးသတ်ပွဲတစ်ပွဲတစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံသပ်ထားကြပါတယ်။
ကမာၻ႕အသန္မာဆံုးလူသားတစ္ဦးဟုဆိုႏုိင္သည့္ Hafthor Bjornsson သည္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္အျဖစ္ (၅၀၁) ကီလိုဂရမ္ကို အေကာင္းဆံုး “မ” ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ Eddie Hall ကို ႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း၌ အလဲထိုးသြားရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ (၅၀၁) ကီလိုဂရမ္ကို “မ” ျပခဲ့ျခင္းသည္ Hafthor Bjornsson အတြက္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ရံုတင္မကဘဲ Eddie Hall ရဲ႕ စံခ်ိန္ကိုလည္း ခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခု၌ ယခုကဲ့သုိ႔ကမာၻ႕စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ Eddie Hall ရဲ႕စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္သည္က ပိုမိုအေရးႀကီးသလား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္စံခ်ိန္သစ္တစ္ခု တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ပိုမိုအေရးႀကီးသလားဆိုသည့္ေမးခြန္းအေပၚ Hafthor Bjornsson က “က်ိန္းေသေပါက္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုအတြက္ပါ။ ဒါက နံပါတ္ (၁) ပါပဲ။ Eddie Hall နဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္က သိပ္ၿပီးမသန္မာဘူး၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း မႀကံ႕ခိုင္ဘူးလို႔လူေတြကေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။”
“ကြ်န္ေတာ္ဒါေတြကို မွားယြင္းေၾကာင္းသက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး အခုလည္းသက္ေသျပခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခဲ့တာပါ။” ဟု ဖြင့္ဟေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ Eddie Hall နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္၍လည္း Hafthor Bjornsson က “ကြ်န္ေတာ္ အခုေလ့က်င့္ခန္းေတြဆင္းၿပီး အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ သူ႔ကိုေသခ်ာေပါက္အလဲထိုးႏိုင္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။” ဟု ဖြင့္ဟေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
Hafthor Bjornsson နဲ႕ Eddie Hall တို႕ရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ပြဲကို မတ္လ (၂၂) ရက္ ေန႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆုံးထိုးသတ္ပြဲတစ္ပြဲတစ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႕ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သုံသပ္ထားၾကပါတယ္။
Previous အရက်မူးပြီး ဝက်ဝံနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့သည့်အမျိုးသား။
Next အမျိုးသမီးများနဲ့ အမျိုးသားများအကြား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၌ စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှု။
ဖလွိုက်မေဝဲလ်သာပိုင်ဆိုင်သည့် ဒေါ်လာ (၂၅) သန်းတန် စံအိမ်ကြီးအကြောင်း။
လက်ဝှေ့အကျော်အမော် မေဝဲလ်သာသည် အိမ်ခြံမြေနဲ့ ပတ်သက်သည့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို အလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိမ်များကို ဝယ်ယူစုဆောင်းသည့်နေရာ၌လည်း ဝါသနာထုံသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဂရီဂေါ်ကို အနိုင်ရရှိပြီးနောက် မေဝဲလ်သာက ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ သူ့ရဲ့ …